विप्लवसँग वार्ता हतियार बिसाएपछि : सरकार
सरकारले हतियार बिसाएर वार्ताको टेबलमा आउन नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संवादका निम्ति सरकार सधैँ तयार रहेको बताए ।
कोषाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय कार्यसमितिको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा हुने भएको छ । गुट–उपगुटले सांगठनिक रुपमा पार्टी कमजोर हुँदै गएकोले त्यसको अन्त्यको लागि यही चैत २८ र २९ गते पोखरामा उक्त सम्मेलन हुन लागेको मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
प्रदेश–१ मा कांग्रेस आक्रामक
प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी तरिकाबाट सञ्चालन भएको भन्दै प्रदेश–१ मा नेपाली कांग्रेस आक्रामक बनेको छ । सरकारले आफ्नो रवैया नसुधारे कांग्रेसले कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश–१ ले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक वर्षमा सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले हतारमा घोषणा गरेको १ सयदिने कार्यक्रम घोषणामै सीमित बन्न पुगेको बताए । “घर–घरमा स्टिकर टाँस्नेबाहेक प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेको छैन,” कोइरालाले भने, “सरकारकै कारण राजनीतिक दलहरूप्रति नै जनताको अविश्वास गुम्ने खतरा देखियो ।”
धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्छः महामन्त्री कोइराला
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जनताले माग गरे संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा जनमत संहग्रमा जान डराउन नहुने धारणा राखेका छन् । फागु अर्थात् होली पर्वको अवसरमा बुधबार टोखास्थित आफ्नो निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले जनताले चाहे संघीयता र गणतन्त्रका विषयामा जनमत संग्रहमा जान डराउन नहुने बताएका हुन् ।
सरकारले नेकपा माओवादी विप्लव समूहको आपराधिक कृयाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सुरु भएको अप्रेसनमा प्रहरीले ४ नेता पक्राउ गरेको छ । काभ्रे जिल्लाको साविक शिखरआम्बोटे गाविस ८ हालको रोशी गाउँपालिका २ काफ्लेडाँडाबाट मंगलबार साँझ विप्लव समूहका झापाका शिव धिताल, दाङका नृपबहादुर विक, भोजपुरका डिकेन्द्र राई र सिन्धुपाल्चोकका विशाल तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बार एसोसिएसनमा चुनावी माहोल
नेपाल बार एसोसिएसनमा चुनावी चहलपहल बढेको छ । १८ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको बारको चैत १६ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय भएको छ । निर्वाचनको माहोल तातेका बेला सोमबार सञ्चार केन्द्र नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा प्रगतिशिल, पेशागत तथा समावेशी कानुन व्यवसायी समूह र लोकतान्त्रिक समूहका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै मन्त्रिमण्डल हेरफेर नहुने प्रस्ट पारेका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले रिक्त रहेको मन्त्री पद बहाली हुने तर मन्त्रिमण्डल भने अहिले नै पुनर्गठन नहुने प्रष्ट पारे । खाली रहेको मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको बहाली चाँडै हुने भन्दै तर मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने पक्षमा भने अहिले आफू नरहेको उनले बताए । “मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ भन्ने विषयमा बाहिर आएको हल्ला निराधार हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “खाली रहेको मन्त्रालयमा चाहिँ छिट्टै मन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सिके राउत र सरकारबीच भएको सम्झौतामा न्यायपालिकाको शंकास्पद भूमिका देखिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर देशमा फेरि गृहयूद्ध निम्ताउन खोजेको उनको आरोप थियो ।
सरकार कम्युनिष्ट लोकतन्त्र स्थापना गर्न लागिपरेको छः राणा
सरकार कम्युनिष्ट लोकतन्त्र स्थापना गर्न लागिपरेको भन्दै राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले आपत्ति जनाएका छन् । सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको सल्लाह नचाहिने र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सेना परिचालन गर्न सक्ने तयारी आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता श्रेष्ठलाई पितृशोक
नेपाली कांग्रे्रेसका केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठलाई पितृशोक परेको छ । नेता श्रेष्ठका पिता पुण्यप्रसाद श्रेष्ठको शनिबार अपराह्न ३ बजे काठमाडौंको ओम अस्पतालमा निधन भएको हो ।
‘फुर्तीका साथ आएँ तर काम गर्न सकिएन’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले कर्मचारीहरूले सोचेजस्तो काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन् । देशको कानुन र परिस्थितिले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको उनको दुखेसो थियो ।
ईपीजीको प्रतिवेदन लोकसभा निर्वाचनपछि मात्रै बुझ्छौं : भारतीय गृहमन्त्री
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा भाजपा पार्टी कार्यालयमा संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री सिंहले दुई देशबीच सुमधुर तथा गतिशिल सम्बन्ध हुुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन भारतमा हुने लोकसभाको निर्वाचनपश्चात् नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्ने पनि स्पष्ट पारे ।
भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत मन्त्रीसरह
सरकारले भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बाँस्कोटाका अनुसार भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम कायम गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले हतारमा निर्णय ग-यो : पौडेल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माथि हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, “क्याबिनेटको निर्णय जुन भएको छ, यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ ।”
गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ : झा
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले संविधान संशोधनलगायतका आफूहरुको मुख्य मागहरु अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा झाले भने, “राजपा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लाइन छोड्दैन । हाम्रा मागहरु पूरा भएका छैनन् ।”